Izindaba - Filter Press Working Principle
Isihlungi cindezela ingahlukaniswa ipuleti kanye nohlaka isihlungi cindezela futhi lalihlehlisiwe ekamelweni lemifanekiso cindezela. Njengemishini yokuhlukanisa enamanzi aqinile, isetshenziswe ekukhiqizeni izimboni isikhathi eside. Inomphumela omuhle wokwehlukanisa nokuzivumelanisa nezimo okubanzi, ikakhulukazi ukwahlukaniswa kwezinto ezibukeka kahle nezinhle.
Isakhiwo somshini wokuhlunga sinezingxenye ezintathu
1.Uzimele: uzimele yingxenye eyisisekelo yomshini wokuhlunga, ngepuleti lokugxila nokucindezela ikhanda emikhawulweni yomibili. Izinhlangothi zombili zixhunywe ngama-girders, asetshenziselwa ukuxhasa ipuleti lokuhlunga, ifreyimu yokuhlunga nepuleti yokucindezela.
Ipuleti le-A.Trust: lixhunywe nosekelo, futhi umkhawulo owodwa wokucindezela isihlungi utholakala esisekelweni. Maphakathi kwepuleti lokugxila lomshini wokuhlunga ibhokisi ibhokisi lokuphakela, futhi kunezimbobo ezine emagumbini amane. Amakhona amabili angenhla angukungena ketshezi lokuwasha noma igesi ecindezelayo, futhi amakhona amabili aphansi yi-outlet (isakhiwo se-subsurface flow noma i-filtrate outlet).
B. Bamba ipuleti: lisetshenziselwa ukubamba phansi ipuleti lokuhlunga nohlaka lokuhlunga, futhi ama-roller ezinhlangothini zombili asetshenziselwa ukuxhasa ipuleti lokubamba eligingqikayo kuthrekhi ye-girder.
C. Girder: kuyinto ethwala umthwalo. Ngokuya ngezidingo zokulwa nokugqwala kwemvelo, ingafakwa i-PVC eqinile, i-polypropylene, insimbi engagqwali noma i-anti-corrosion enamathela entsha.
2, Ukucindezela isitayela: ukucindezela okwenziwa ngesandla, ukucindezela ngemishini, ukucindezela i-hydraulic.
Ukucindezela kwamanual: isikulufa jack mechanical kusetshenziselwa ukusunduza ipuleti ngokucindezela ukucindezela ipuleti yokuhlunga.
Ukucindezela kwemishini: indlela yokucindezela yakhiwa yizimoto (ezifakwe isivikeli sokugcwala okuthuthukile), isinciphisi, ibhangqa lamagiya, induku yesikulufu nenathi engaguquki. Lapho ucindezela, imoto ijikeleza phambili ukushayela isinciphisi negiya lamagiya ukwenza induku yesikulufu ijikelezise isikulufa esingaguquki, bese iphusha ipuleti ngokucindezela ukucindezela ipuleti yesihlungi nefreyimu yokuhlunga. Lapho amandla okucindezela ekhudlwana futhi emakhulu, umthwalo wamanje wemoto uyanda. Lapho ifinyelela emandleni okucindezela aphezulu asethwe umvikeli, imoto inqamula ukunikezwa kwamandla futhi iyeke ukujikeleza. Ngoba induku yesikulufu nesikulufa esinqunyiwe kunokwethenjelwa kokuzikhiya kwesikulufu engela, ingaqinisekisa ngokuthembekile isimo sokucindezela enqubeni yokusebenza. Lapho ibuya, imoto iyahlehla. Lapho ibhulokhi yokucindezela epuletini yokucindezela ithinta iswishi yokuhamba, ibuyela emuva emuva ukuze ime.
C. Ukucindezela kwe-Hydraulic: indlela yokucindezela i-hydraulic yakhiwa esiteshini samanzi, isilinda samafutha, i-piston, induku ye-piston kanye nesiteshi se-hydraulic esixhunywe yinduku ye-piston nokucindezela ipuleti, kufaka phakathi imoto, ipompo likawoyela, i-valve yokusiza (ukulawula ingcindezi) i-valve eguqula ingcindezi , uwoyela wesifunda nethangi likawoyela. Lapho ingcindezi ye-hydraulic icindezelwa ngomshini, isiteshi se-hydraulic sinikezela ngamafutha acindezela kakhulu, futhi ingxenyeni ye-element eyenziwe ngosilinda kawoyela nepiston igcwele uwoyela. Lapho ingcindezi inkulu kunokumelana okungqubuzanayo kwepuleti lokucindezela, ipuleti lokucindezela licindezela kancane ipuleti lokuhlunga. Lapho umfutho ocindezelayo ufinyelela inani lengcindezi elibekwe yi-valve yokusiza (ekhonjiswa yisikhombi se-gauge yengcindezi), ipuleti lokuhlunga, ifreyimu yokuhlunga (uhlobo lozimele wepuleti) noma ipuleti lokuhlunga (uhlobo lwekamelo elixegisiwe) kuyacindezelwa, nevelufa yokusiza iqala ukucindezela Lapho ulayisha, nqamula ukunikezwa kwamandla kwemoto bese uqedela isenzo sokucindezela. Lapho ubuya, i-valve eguqukayo iyahlehla futhi uwoyela wokucindezela ungena emgodini wenduku wesilinda samafutha. Lapho ingcindezi kawoyela inganqoba ukumelana kokushayisana kwepuleti lokucindezela, ipuleti lokucindezela liqala ukubuya. Lapho ukucindezela kwe-hydraulic kugcina ingcindezi izenzekelayo, amandla okucindezela alawulwa yigeji yencindezi yokuxhumana kagesi. Isikhombi esiphezulu somkhawulo nesikhombi semikhawulo esiphansi segeji yengcindezi kusethwe kumanani adingekayo ngenqubo. Lapho umfutho ocindezelayo ufinyelela umkhawulo ongaphezulu wegeji yengcindezi, ukunikezwa kwamandla kuyanqanyulwa bese iphampu kawoyela iyeka ukunikeza amandla. Amandla okucindezela ayancipha ngenxa yokuvuza kwangaphakathi nangaphandle kohlelo lwamafutha. Lapho igeji yengcindezi ifinyelela kusikhombi esiphansi somkhawulo, amandla kagesi axhunyiwe Lapho ingcindezi ifinyelela umkhawulo ongaphezulu, ugesi unqanyulwa bese iphampu kawoyela iyeka ukuhambisa uwoyela, ukuze kuzuzwe umphumela wokuqinisekisa amandla acindezelayo inqubo yokuhlunga izinto.
3. Ukuhlunga isakhiwo
Isakhiwo sokuhlunga sakhiwe ngepuleti yokuhlunga, ifreyimu yokuhlunga, indwangu yokuhlunga kanye nokucindezela ulwelwesi. Zombili izinhlangothi zepuleti lokuhlunga zimbozwe ngendwangu yokuhlunga. Lapho ukucindezela ulwelwesi kuyadingeka, iqembu lamapuleti wokuhlunga lakhiwa ungcwecwe wepuleti kanye nepuleti lekamelo. Izinhlangothi ezimbili zepuleti lesisekelo sepuleti le-membrane zimbozwe nge-diaphragm yenjoloba / i-PP, uhlangothi olungaphandle lwesifudumezi lumbozwe ngendwangu yokuhlunga, kanti ipuleti eseceleni yipuleti ejwayelekile yokuhlunga. Izinhlayiya eziqinile zibhajwe egumbini lokuhlunga ngoba ubukhulu bazo bukhulu kunobubanzi bendawo yokuhlunga (indwangu yokuhlunga), futhi i-filtrate iphuma iphuma emgodini wokukhipha ngaphansi kwepuleti lokuhlunga. Lapho ikhekhe lokuhlunga lidinga ukucindezelwa lomile, ngaphezu kokucindezela i-diaphragm, umoya ocindezelweyo noma umusi ungangeniswa usuka ethekwini lokuwasha, futhi ukugeleza komoya kungasetshenziselwa ukugeza umswakama kwikhekhe lokuhlunga, ukunciphisa okuqukethwe umswakama kwekhekhe lokuhlunga.
(1) Imodi yokuhlunga: indlela yokuphuma kwe-filtrate ivuliwe ukuhlunga kohlobo nokuhlunga kohlobo oluvaliwe.
A. Ukuhlunga kokugeleza okuvulekile: umlomo wombhobho wamanzi ufakwe emgodini wokungena ongezansi wepuleti ngalinye lokuhlunga, bese i-filtrate igeleza ngqo iphuma kumbhobho wamanzi.
B. Ukuhlungwa kokugeleza okuvaliwe: phansi kwepuleti ngalinye lokuhlunga kunikezwa umgodi wesiteshi esidayisa uketshezi, futhi izimbobo zokukhipha uketshezi zamapuleti wokuhlunga amaningana zixhunywe ukwakha ishaneli esidayisa uketshezi, esikhishwa yipayipi elixhunywe ne-liquid outlet umgodi ngaphansi kwepuleti lokufaka.
(2) Indlela yokuwasha: lapho ikhekhe lokuhlunga lidinga ukuwashwa, kwesinye isikhathi lidinga ukuwashwa ngendlela eyodwa nokuwashwa kwezindlela ezimbili, kuyilapho lidinga ukuwashwa ngendlela eyodwa nokuwashwa kwezindlela ezimbili.
A. Ukugeleza okuvulekile okugeleza ngendlela eyodwa ukuthi uketshezi lokuwasha lungena ngokulandelana kusuka emgodini wokufaka uketshezi lokuwasha lwepuleti lokugxila, kudlule endwangwini yokuhlunga, bese kudlula ikhekhe lokuhlunga, bese kuphuma kupuleti lokuhlunga elingagqamile. Ngalesi sikhathi, umbhobho oketshezi lwamanzi wepuleti enamanzi usesimweni esivaliwe, kanti umlomo wombhobho oketshezi wepuleti elingenalutho usesimweni esivulekile.
B. Ukugeleza okuvulelekile okugeza izindlela ezimbili ukuthi uketshezi lokuwasha lugezwa kabili ngokulandelana kusuka emigodini yokufaka uketshezi lokuwasha ezinhlangothini zombili ngenhla kwepuleti lokufaka, okungukuthi, uketshezi lokuwasha lugezwa kusuka kolunye uhlangothi kuqala bese kusuka kolunye uhlangothi . Ukukhishwa koketshezi lokuwasha kuhambisane nalokho okufakwayo, ngakho-ke kubizwa nangokuthi izindlela ezimbili zokuwasha.
C. Ukugeleza ngendlela eyodwa kwe-polyester engaphansi ukuthi uketshezi lokuwasha lungena kupuleti elinezimbotshana ngokulandelana kusuka emgodini wokufaka uketshezi lokuwasha kwepuleti lokufaka, kudlule ngendwangu yokuhlunga, bese kudlula ikhekhe lokuhlunga, kuphume kulokho perforated isihlungi ipuleti.
D. Ukuwashwa kwezindlela ezimbili ukuthi uketshezi lokuwasha lugezwa kabili ngokulandelana kusuka emigodini emibili yokugeza uketshezi ezinhlangothini zombili ngenhla kwepuleti lokumisa, okungukuthi, uketshezi lokuwasha lugezwa kusuka kolunye uhlangothi kuqala, bese kusuka kolunye uhlangothi . Ukukhishwa koketshezi lokuwasha kuhlukanisiwe, ngakho-ke kubizwa nangokuthi ukugeza okuphambene kwezindlela ezimbili.
(3) Hlunga indwangu: isihlungi sendwangu uhlobo oluphakathi kwesihlungi esiphakathi. Ukukhethwa nokusetshenziswa kwendwangu yokuhlunga kudlala indima enkulu empumelelweni wokuhlunga. Lapho ukhetha, kufanele kukhethwe indwangu yokuhlunga efanelekile nosayizi wepore ngokuya ngenani le-pH lezinto zokuhlunga, usayizi wezinhlayiyana eziqinile nezinye izinto, ukuze kuqinisekiswe izindleko zokuhlunga eziphansi nokusebenza kahle kokuhlunga. Uma usebenzisa, indwangu yokuhlunga kufanele ibe bushelelezi ngaphandle kwesaphulelo nosayizi wepore ungavuleki.
Ngokuthuthuka komkhakha wesimanje, izinsizakusebenza ziphela usuku nosuku, futhi insimbi eye yembiwa ibhekane nesimo “sabampofu, esihle nesinokuxubana”. Ngakho-ke, abantu kufanele bagaye i-ore finer futhi bahlukanise izinto "ezinhle, udaka nobumba" kokuqinile-uketshezi. Kulezi zinsuku, ngaphezu kwezidingo eziphakeme zokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, amabhizinisi abeka phambili izidingo eziphakeme nezibanzi zobuchwepheshe bokuhlukanisa uketshezi oluqinile kanye nemishini. Kuhloswe ngezidingo zenhlalo zokucubungula amaminerali, insimbi, uphethiloli, amalahle, imboni yamakhemikhali, ukudla, ukuvikelwa kwemvelo nezinye izimboni, ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuhlukanisa uketshezi kanye nemishini kukhuthaziwe, futhi ububanzi nokujula kwensimu yaso isanwebeka.